अब जे’लबाट छुटदैछन् प्रमिला ! युट्युवरको प्रश्नले रिसाए आफन्त, सन्तोष दाइकी दिदी र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/अब जे’लबाट छुटदैछन् प्रमिला ! युट्युवरको प्रश्नले रिसाए आफन्त, सन्तोष दाइकी दिदी र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । चितवनमा केही समय चर्चित भएको सन्तोष र प्रमिलाको घ टना अब सेलाउँदै गएको छ । प्रमिला प्रहरी हिरासतमा छन् भने सन्तोष अहिले साउदी उडिसकेका छन् । श्रीमतीले घर छोडेर हिडेको खबर पाएपछि साउदीवाट इमरजेन्सी टिकटमा नेपाल आएका सन्तोष फेरी साउदी फर्किएका छन् । विदेशमा कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर अर्कैसंग गएकी प्रमिला र उनका प्रेमी अहिले हिरासतमा छन् । अहिले घरमा अब सन्तोष र प्रमिलाका छोराछोरी मात्र छन् ।
अहिले घरमा आमा र बुवा विहिन बसेका छोराछोरीहरुले आफुहरुलाई भिडियो लिन आएका युट्युवरका कारण स म स्यामा परेको बताएका छन् । उनीहरुले आफुहरुको परिक्षा आएका कारण युट्युवरहरु घरमा भिडभाड गर्न आउँदा पढाईमा समस्या हुने बताएका छन् । सन्तोषको दिदीले पनि साना बालबालिकालाई अनेकथरी प्रश्न सोध्ने र त्यसलाई नराम्रो हेडलाइन बनाएर भिडियो राख्दा बच्चाहरुमा नकारात्मक असर गर्ने बताएका छन् । साना बालबालिकाले के बोल्न हुन्छ के बोल्न हुँदैन भन्ने थाहा नपाउने भएकाले अनेकथरी प्रश्न सोध्न नहुने सन्तोषको दिदी नाता पर्ने महिलाले बताइन् । उनले सन्तोषको समस्यामा साथ दिएका सबै मिडियालाई धन्यवाद समेत दिएकी छन् ।
बच्चाले बोलेका कुरालाई नकारात्मक सन्देश जानेगरी हेडलाइन राखेर प्रसारण गरेका कारण उनीहरुको चित्त दुखाई छ । घरमा एक्लिएका दुई छोराछोरीले आमा र बुवाका लागि मार्मिक सन्देश छोडेका छन् । बच्चाहरुलाई अनेकथरी प्रश्न सोध्ने र अनावश्यक टिप्पणी हुने खालका सामग्री नराख्न अनुरोध समेत गरेका छन् । उनलाई नायक राजेश हमालको बारेमा केही बोल्न लगाएका थिए ।
तर उनले नजानेर टिप्पणी गरेका कारण सन्तोषका छोराले भिडियोवाट फेरी माफि मागेका छन् । सन्तोषले कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर हिडेको भनिएकी प्रमिला ३५ दिन पछि फेला परेकी थिइन् । आमा प्रहरी हि रा स तमा पुगिन् भने बुवा उनीहरुकै भविष्यका लागि भन्दै फेरी साउदी उडेका छन् । बुवालाई विदाई गर्दा उनका छोराछोरी निकै भावुक भएका छन् । बुवालाई विदाई गर्दा रोएको बताएका छन् । उनीहरुले आमा फर्केर फेरी घरमै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको बताए ।
सँसार चकित पार्ने रेष्टुरेण्ट नेपालमा|| पानी मुनि बसेर खाना,यस्तो अचम्म (भिडियो)
रन्जनालाई फाँ*सी हुनुपर्छ भन्दै अन्तरबार्तामै रोए पुण्य ! यसकारण संसार छोडे रविले…